भुपेन्द्र बडुवाललाई कसरी, र किन मारियो ? को हुन् नबिन ? यो केसको खास नालीबेली यस्तो (भिडियो हेर्नुहोस ) - Microlink Media::News Media Website
अध्ययन लम्कीमा भए पनि अमेरिका जाने तयारीका साथ उनी काठमाडौं गएका थिए,’ बडुवालले भने, ‘भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएपछि अमेरिका जाने सपना पूरा गर्न तयारीमा जुटेका थिए। तर मंगलबारको घ’टनाले भूपेन्द्रको सपना अधुरै रह्यो। उनका अनुसार चिसापानीका नविन रावलको समूहले उनको ज्यान लिए । ‘विभिन्न घ’टनामा सं’लग्न भएको पर्याप्त प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सजाय नहुँदा रावल लगायतको मनोवल बढेको थियो,’ बडुवालले भने।’